Fifandraisana: mpivady mifamatotra | Reward Foundation
Home fifandraisana Pair Bonding Couples
Na dia mety ho rafitra natao ho an'ny fiaraha-monina aza ny fanambadiana, ny faniriana hanana vady dia biolojika. Ny firaisana ara-nofo sy ny fifamatorana dia samy valisoa voajanahary. Ny olombelona dia ao anatin'ny vondrona latsaky ny 5% ny biby mampinono antsoina hoe mpivady mpiray tsiroaroa. Midika izany fa manana ny firafitry ny ati-doha isika ka mamela antsika hanao vady mandritra ny androm-piainana, ho monogamose ara-tsosialy, toy ny angano. Avelany hifamatotra mandritra ny fotoana maharitra sy lava izahay hikarakaraan'ny mpikarakara roa ny zanany. Na izany aza, ny hoe 'monogamous sociale' dia tsy mitovy amin'ny hoe 'monogamous firaisana ara-nofo'. Ny fakam-panahy 'hilalao an-trano' dia eo amin'ny ankamaroan'ny biby mampinono rehetra anisan'izany ny olombelona. Azo jerena tsara ny literatiora Eto.
The valisoa no misy an'ireto firafitry ny fatorana ireto. Io rafitra io ihany no mitondra antsika any amin'ny valisoa voajanahary hafa amin'ny sakafo sy rano. Mampalahelo fa eo koa no misy vokany ny valisoa voajanahary na ny artifisialy toy ny alikaola, nikôtinina ary zava-mahadomelina. Nosamborin'izy ireo ny rafitra fahafinaretana / valisoa. Raha ny marina, ny valisoa artifisialy toy ny kôkainina sy ny alikaola dia mety hiteraka fahatsapana hafaliana mahery kokoa noho ny firaisana. Hitan'ny mpikaroka fa ny andevo mpivady, raha oharina amin'ny biby izay tsy tia volo dia mora voan'ny fiankinan-doha. Ho hitantsika eo ambany eo ambanin'ny The Coolidge Effect etsy ambany ny antony tena olana amin'ny fanohanana ny fitiavana.
Ilaina ny fifamatorana sy ny fifampatokisana. Matetika isika dia te-haneho fitiavana amin'ny alàlan'ny vatantsika toy ny famihina, fanorohana, fikolokoloana, famporisihana ary fanaovana firaisana. Ny fikasihana feno fitiavana dia "mampitony ilay biby masiaka" ary tena manasitrana. Mpivady manana fifandraisana feno fitiavana mirindra tsara ara-batana manasitrana haingana kokoa taorian'ny ratra. Na mieritreritra fitiavana amin'ny resaka fitiavana 'fitiavana' isika, na amin'ny filan'ny nofo sy ny filan'ny nofo, ireo fahatsapana sy fihetsem-po ireo dia miaina ao amin'ny ati-doha indrindra. Ka amin'ny fianarana araka izay azontsika atao ny fomba fiasan'ny ati-doha dia hanampy antsika hiaina ireo fihetsem-po manatsara fiainana amin'ny fomba voajanahary tsy tapaka.
<< Fitiavana toy ny fifamatorana Fitiavana toy ny filan'ny nofo >>